Ny olona rehetra dia maniry asa marobe ary fampianarana izay hanampy azy ireo ho lasa lavitra. Na izany aza, maro ny olona mila mamoy ny tanjony sy ny tanjon'ny fampianarana isan-taona. Fantatry ny CMOAPI fa zava-dehibe ny fanabeazana mety ary izany no antony ampianay hanabe ny mpamaky momba ny sary sy ny fakan-tsary miaraka amin'ny famoahana sy fanoloran-kevitra. Tsy mila mandoa be loatra amin'ny fitaovanao ianao raha toa ka mampiasa ny loharanom-panombohana natolotray anao eto.
Ny Scholarship an'ny CMOAPI dia fampivoarana vaovao izay tena reharehanay indrindra. Vatsim-pianarana isan-taona 2000 isan-taona no namolavola ny mpianatra hahatratra ny nofinofinofinny fampianarana sy asa. Ity vatsim-pianarana ity dia homena mpianatra iray isan-taona mba hanampy amin'ny fandoavam-bola amin'ny fampianarana. Izahay dia mitady roa heny mampitombo avo roa heny ny mari-pahaizana ho an'ny taona manaraka. Ny Scholarship CMOAPI dia hetsika kely avy amin'ny anay manampy ny mpianatra hanatratra ny nofinofin'izy ireo. Raha liana amin'ny fandaharam-pianarana ho an'ny mari-pahaizana izahay ary te handray anjara amin'ny fifaninanana dia vakio tsara ny fanazavana rehetra omena eto ambany.
·Eo am-panaovana ny oniversite manana mari-pahaizana amin'ny sehatra fianarana manontolo andro na fianarana any Etazonia.
·GPA kumulative ambany amin'ny 3.0 (na mitovy).
·Porofo ny fisoratana anarana ao amin'ny mari-pahaizana diplaoma na ny diplaoma diplaoma.
Ny fomba hampiharana
·Manorata lahatsoratra momba ny lohahevitra hoe "Inona no atao hoe Custom Synthesis & Research Research?"
·Tokony halefanao aminay ny talohan'ny 7 Desambra 2020.
·Azonao atao ny mandefa ny lahatsoratrao (amin'ny endrika MS Word ihany) amin'ny alàlan'ny mailaka mankany [email voaaro]
·Aza hadino ny manonona ny anaranao, ny mailaka ary ny laharana findainao amin'ny fangatahana.
·Takiana hilazana ny antsipirian'ny oniversite sy ny oniversite koa ianao amin'ny fampiharana.
·Ny lahatsoratra ihany no hampiavaka sy mamorona no handinihana izany amin'ny fifaninanana.
·Ny mpandresy dia hifandray amin'ny alàlan'ny mailaka ary tsy maintsy mamaly ao anatin'ny 5 andro mba hanaiky ny valisoa. Raha tsy misy valiny voaray ao anatin'io fotoana io, dia hisy mpandresy iray hafa hisafidy handray ilay loka.
·Andininy ihany no ho raisina ary alohan'ny fe-potoana hojerena ny fifaninanana.
·Ny karangan-tsoratra dia hotsaraina amin'ny marika maro. Ny sasany amin'izy ireo dia: mampiavaka azy, mamorona, mahay mandanjalanja, lanjan'ny fampahalalana nomena, fitsipi-pitenenana sy fomba sns.
·Ireo mpandresy dia ho ampahafantarina ny 15 desambra 2020.
Ny politikantsika momba ny fiainana manokana:
Azontsika antoka fa tsy misy fampahalalana manokana ho an'ny mpianatra no zahana, ary ny fampahalalana momba ny tena manokana dia tazomina ho an'ny fampiasana anatiny fotsiny. Tsy manome ny antsipiriany ho an'ny mpianatra ho an'ny antoko fahatelo izahay, fa manana zo hampiasa ireo lahatsoratra natolotra anay amin'ny fomba rehetra irintsika izahay. Raha mandefa lahatsoratra amin'ny CMOAPI ianao dia omenay ny zonay momba ny atiny, anisan'izany ny fananana atiny voalaza. Marina izany na ekena ny fanekena ho mpandresy na tsia. Ny CMOAPI.com dia manana alalana hampiasa ny asa rehetra alefa havoaka ho avoaka araka izay heveriny fa mety sy amin'izay heverina fa mety. Hamarinina ny mpandresy rehefa afaka manome porofo momba ny fisoratana anarana ao amin'ny oniversite, oniversite na sekoly mianatra. Anisan'izany ny sarin'ireo ID ankehitriny mpianatra, ny adin-tsekoly, ny porofon'ny porofo ary ny volavolan-dalàna momba ny fampianarana. Ny mpandresy faharoa dia hofidina raha tsy afaka manome ireo porofo ireo ny mpandresy voalohany.